ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच गएको शनिबार टेलिफोनमा वार्ता भएको छ के हुँदै छ भित्रभित्रै ? – Khabar PatrikaNp
ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच गएको शनिबार टेलिफोनमा वार्ता भएको छ के हुँदै छ भित्रभित्रै ?
August 26, 2020 248
काठमाडौं नेपालको सत्ता राजनीतिमा आफ्नो भूमिका फिका हुँदै गएपछि चिढिएको भारतले २०७२ मा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी नै गरेको थियो । त्यसयता उसको भूमिका मात्र कमजोर भएको छैन, नेपाल र नेपालीको सद्भाव पनि क्रमशः गुमाउँदै गएको छ । तर, केही दिनयता काठमाडौँमा भारतीय राजदूतको सक्रियता एकाएक बढेको छ ।भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राको सक्रियता यस्तो समयमा देखिएको छ, जतिबेला सत्ताच्यूत हुनै लागेका भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकाएक बलिया बनेका छन् ।
पार्टीभित्रको खल्बलिएको समीकरण पुनः ओलीका निम्ति अनुकूल बनेको छ । ओलीलाई जसरी पनि गलहत्याउन लागिपरेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बोली फेरिएको छ ।भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा रहेको संवादहीनता तोडिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच गएको शनिबार टेलिफोनमा वार्ता भएको छ ।
सम्बन्ध सुधारको संकेतस्वरुप द्विपक्षीय विकास आयोजना निरीक्षण संयन्त्रको बैठक बसेको छ । आगामी दिनमा संवाद जारी राख्ने समझदारी बनेको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पाँच दिनभित्र सिनारियो परिवर्तन हुने भनेलगत्तै माथिका घटनाक्रम देखिएका छन् । नेपाल चीनको नजिक पुगेको र चीनकै लहैलहैमा लागेर भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरेको भन्दै दिल्लीका मिडिया र नोकरशाहहरु कुर्लिरहेका बेला काठमाडौँको राजनीतिक माहोलले एकाएक नाटकीय मोड लिएको हो ।
यसबीचमा भारतीय राजदूत क्वात्राले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि उनकै दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसम्मलाई एक्लाएक्लै भेटेका छन् । क्वात्राले प्रचण्ड र नेपाललाई गएको मंगलबार भेटेका हुन् भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसअघि नै बालुवाटार पुगेर भेटेका थिए ।
तीनै जनाको निवासमा पुगेर गरेको छलफलमा दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार र पछिल्लो नेकपाभित्र विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेको बुझिएको छ ।क्वात्राले सीमा समस्या समाधानका विषयमा पनि चासो राखेको पाइएको छ । उनले कालापानी र सुस्ताको विषय परराष्ट्र सचिव र प्राविधिक तहमा कुरा मिल्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक तहकै समझदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि पहिलोपल्ट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा द्विपक्षीय सीमा कार्यदल (बीडब्लूजी)लाई यो जिम्मा दिइएको थियो ।
नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग आफ्नो नक्सामा समेटेपछि भारतले सीमा समस्याबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो । यो विषय प्रधानमन्त्रीसँग मात्र नभई उनको दलका अरु दुई प्रभावशाली नेता प्रचण्ड र नेपालसामु पनि राखेका छन् ।
नेपाली पक्षले पनि जसरी हुन्छ, वार्ता अगाडि बढाउन चाहेको छ । नेपालले आफ्नो पक्षमा पर्याप्त प्रमाण भएकाले पनि कूटनीतिक वार्ता र पहलकदमीमै जोड दिइरहेको छ । तर भारतले प्रमाण केलाउनेभन्दा भावनात्मक र अरु कुरा गरेर सीमा समस्यालाई विषयान्तर गर्दै आएको छ ।
केही समयअघि एक भारतीय पूर्वप्रशासक एवं नेपालका लागि पूर्वराजदूतले नेपालले भारतको विश्वास जितेमा प्रमाण नहेर्ने बताएका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि सञ्चारकर्मीहरुले सीमा अतिक्रमणबारे सोधेको प्रश्नमा विषयान्तर गरी यति कठिन समयमा पनि औषधी लगायतका सामग्री नेपालमा पठाइरहेको सम्झन भनेका थिए ।
सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकमा ओली झण्डै अल्पमतमा परिसकेका बेला वामदेव गौतम र प्रचण्डले नाटकीय तवरले अडान परिवर्तन गर्नु र भारतसँग वार्ता अगाडि बढ्नु संयोग मात्र होइन भन्ने माथि उल्लिखित परिदृश्यले प्रस्ट पार्छ ।
भित्रभित्रै भारतीय संस्थापनसँग नेपाली नेताहरुको अन्तक्र्रिया र गोप्य मन्त्रणाको परिणामस्वरुप यो स्थिति आएको हुन सक्ने आधार बलिया बनेका छन् । तत्काललाई ओलीको सत्ता संकट गर्ने, प्रचण्डको अहंको तुष्टि हुने र उस्तै परे भविष्यका निम्ति पनि केही आश्वासन र ग्यारेन्टी प्राप्त हुने स्थिति अहिले बनेको हुनुपर्छ ।
तर, सीमा समस्या समेत सत्ता समीकरणमा बाह्य भरथेग र चलखेलकै अंगका रुपमा जोडिएको हो भने त्यो गम्भीर र संवेदनशील पक्ष हो । यस्तो भएमा नेपाल र नेपालीले फेरि धोका पाउनेछन्, केही नेताले जितेको अनुभूत गर्नेछन् । वास्तविक रुपमा जित्ने अरु नै हुनेछन् ।
Prevगोरु काटेको निहुँमा झापामा प्रहरी माथि आक्रमण, जवाफी कारवाहीमा एक जनाको निधन
Nextएकै दिन ५१ आर्मीसहित ७३ जना कोरोना संक्रमित !
पर्वतमा पहिरो त्रास : रात परेपछि ओछ्यान बोकेर स्कूलमा !
सर्ट फिल्म ‘मेरो कथा’ सार्वजनिक, लकडाउनको दर्दनाक पिडा छ ! भिडियो हेर्नुहोस
कति निष्ठुरी दैब : ६ महिनाका बालक र परिवारका नौ जनाको सामूहिक दाहसंस्कार